Mahafinaritra amin'ny lehibe ny olona: ahoana no faly hanambady vahiny. mahita ny
Tsy izay rehetra sampa tsy ampy amin’ny vehivavy mitondra ny fiainantsika manokana ao an-trano, fa tsy hoe tsy maintsy ho kivy sy hanaiky ny fanirery. Azonao atao hatrany ny mitady fomba ny ho faly, fa mila manao ezaka. Ny vahaolana tsara ho handinika lehibe ny Fiarahana amin’ny olona monina any ivelany. Tany Eoropa sy ETAZONIA, dia olona maro nofy mba hanambady vehivavy sampa tsy ampy amin’ny teny endrika. Izy ireo tsy mankasitraka ihany tarehy, fa ny fahadiovam-po, ny hatsaram-panahy sy ny fitsitsiana, ny fahaiza-manao amin’ny fotoana mety mba hanome ny vadiny, ho kivy ny asa. Ny fomba tsotra indrindra mba hahatonga ny fifandraisana amin’ny olona fifandraisana lehibe tranonkala izay manome izany fanompoana izany. Famoronana tsara ny portfolio eo amin’ny toerana avo ny mpanatrika, dia afaka manao matotra ny Fiarahana amin’ny lehilahy manan-karena. Fa mandoa ny saina ho anao mila mihaino tsara ny fanontaniana. Maro ireo fitsipika izay mety mahaliana ny olona ny Eoropeana. Ny zavatra voalohany dia mila maka sary tsara. Tokony ho tsara toetra, tsara kokoa raha tsy retouching, izay taty aoriana ilay mpanompo dia afaka ny hahita anao. Tokony hahita ny sary tsy faly sy mitsiky, ny sasany amin’izy ireo dia tokony ho feno ny fitomboana. Ny sary isan-karazany, tsy manana ny fahatsapana fa na ny asa, na ny aina taona rehetra manodidina.
Avy namoaka sary ianao ao amin’ny swimsuit, na dia bebe kokoa raha tsy misy azy, dia tsara kokoa ny tsy mety, satria lehibe ny fifandraisana amin’ny vahiny ny olona dia tsy afaka hahita. Mazava ho azy fa ny hafatra dia ho be dia be, fa ny ankamaroan’izy ireo dia ho manana vetaveta afa-po. Ankoatra izay, tsy manaja tena Eoropeana dia manolotra anareo ny fanambadiana. Mba matotra ny Fiarahana amin’ny lehilahy mpanan-karena mbola natao, dia mila manoratra kely momba ny tenanao. Efa milaza fa tsy dia tsara ny olona no tsy matahotra ny zava-tsarotra. Izany no soso-kevitra miresaka ny momba ny tiany, asa, asa, fialam-boly fotsiny. Ny andinin-teny tokony hahaliana sy ho mora voasoratra, kokoa amin’ny malagasy. Raha ny Fiarahana amin’ny lehilahy manan-karena, ho an’ny fifandraisana matotra no nitranga, izany dia tena zava-dehibe mba hahafahana mifandray. Mila mampiseho ny mety ho vady fa ny nofy dia tsara ny mitory noho ny aminao, ary tsy lavitra any ivelany, mahazo zom-pirenena, ary tsy efa toy izany. Tokony hiezaka ny hahafantatra bebe kokoa ny interlocutor, noho izany dia tokony ho liana amin’ny ny toetra ara-panahy, fa tsy ny haben’ny ny kitapom-bola. Fanontaniana toy izany dia amin’ny ankapobeny tsy mendrika, dia tsy soso-kevitra mba manontany azy ireo. Raha ny mety mpampakatra dia manomboka eny ny fidiram-bola, dia tokony ho nanaitra, tahaka ny manan-karena Eoropeanina tsy hanao izany. Ny manomboka ny fifandraisana amin’ny Eoropeana, dia tokony tsy ho matokitoky foana, satria izany matetika no mitranga fa ny olona avy any ivelany no antonony, azo ampiharina sy ny drafitry ny fiainana mandritra ny taona maro ho avy. Noho izany antony izany, mila mampiseho lehibe sy misaina ny olona, izay tsy miavaka ny voahevitra asa. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa manan-karena ny olona dia tena mampiahiahy.
Tsy te-ho voafitaka, ka nanontany izay vaovao
Noho izany antony izany, dia tsy ilaina ny lainga, manao ny»saron-tava». Izany rehetra izany dia ela na ho haingana dia hanambara, ny mifanohitra amin’izany, dia tokony hahita ny tenanao ho toy ny milaza ny marina ny olona, marefo amin’ny lafiny sasany. Fa mba handeha lavitra loatra amin’ny frankness tsy very maina izany, satria ny olona mieritreritra hoe tsy mahalala fomba sy vonona ny hanokatra ny voalohany comer. Izany dia tsy soso-kevitra ny hanangana ny tenany amin’ny vy vehivavy iray sy ny vehivavy iray. Tao Eoropa, ireo vehivavy ampy, izany dia tsara mba hanehoana ny manetry tena, malemy fanahy, tsara fanahy, tsy ampy. Ny olona dia hahatsapa ny tenany ho knight, izay zavatra ilaina mba handresy ny fon’ny vehivavy tsara tarehy.
Izy dia tsy tara ny fahafahana ary miezaka ny handresy anao
Raha toa ianao ka handeha hanambady olona avy any Eoropa, mila mahafantatra bebe kokoa momba ny toe-tsain’ny olona izay izy no tompony. Izany dia hamonjy anao avy maimaika ny fihetsika sy fanambarana. Ohatra, ny fanoratana ny teny grika, na ny Espaniola voalohany, dia mety mahazo valiny ary dia mifandray amin’ny resaka amin’ny azy ireo bebe kokoa. Na izany aza, ny Swede sy alemà fitaka io dia tsy miasa izy ireo, dia zara raha mahafeno ny vehivavy, rehefa mino fa ny dingana voalohany tokony olona izany. Ihany koa dia tokony hianatra momba ny fomban-drazana sy ny fivavahana mihambo ho avy ny mety ho vadiny.
Azo inoana fa ianao dia tsy maintsy hiova finoana
Raha toa ianao ka mahita ity dia tsy azo ekena, dia tsy maintsy ho mifidy ao ny raharaha ny zom-pirenena sy ny fivavahana ny mpampakatra. Izany no ilaina mba tsara fantaro ny teny izay nolazain ny hoavy vady, na mifandray aminy aorian’ny fanambadiana dia ho sarotra
← Video fandraisam-peo ny dianay tany Philippines an-tserasera
Filipina. Ao an-toerana fiantsenana foibe a. Cebu faritany, any Philippines-Fiainana ao Filipina-Tsipika →